Dhigirii Dudziro »Hodges University
Gamuchirai Hodges Vakapedza kudzidza !!!
Makorokoto nekuwana degree rako uye kutora rinotevera danho mune rako ramangwana. Isu tinofara uye tinodada neumwe neumwe wenyu! Kunyange chitsauko ichi chingave chiri kusvika kumagumo, iwo unongova mavambo emazhinji emikana mikana iyo dhigirii rako idzva richapa parwendo rwako ruri pamberi
Tinotarisira kuzokuona gore rino ku 31st Kutanga Mhemberero!
Hodges Yunivhesiti Kupedza Kudzidza Kutanga
Zuva: Svondo, Chikumi 20, 2021
Nguva: 4:00 pm
Nzvimbo: Hertz Arena, 11000 Everblades Parkway, Estero, Florida 33928
Ziva Usati Waenda Ruzivo
Gore rega rega, mhemberero yekupedza kudzidza ndiyo inonyanya kukosha chiitiko chedzidzo Hodges University inobatira vadzidzi uye nemhuri yese yeHodges. Ndiwo magumo emakore ekushanda nesimba, kutsungirira, uye kuzvipira pachako kune vadzidzi nemhuri zvakafanana. Zuva rakadai rinofanira kupembererwa. Yedu 31st Kutanga Mhemberero inokudza mhemberero dzechinyakare dzinoenda pamwe nemhemberero yekubudirira kwako mune zvedzidzo. Mhemberero yegore rino yeKutangisa yakavhurika kune chero mudzidzi anopedza kudzidza kubva June 6th, 2019 kusvika Chivabvu 2, 2021.
Pazasi, isu takapa Yekupedza Kudzidza Rondedzero yakagadzirirwa kukugadzirira iwe zuva rekupedza uye kupindura mibvunzo ine chekuita nemhemberero yekupedza kudzidza. Iyi yekutarisa inotsiva yedzidzo yepamutemo yekudzidzira. Ndokumbirawo muongorore chikamu chimwe nechimwe kuti muwedzere ruzivo rwamunoda kuti mugadzirire June 20th Zuva Rokupedza Kudzidza.
1. Pedzisa Zvese Degree Zvinodiwa
Ibasa remudzidzi wega wega kupedzisa Chinangwa cheGraduate fomu pakutanga kwechikamu chake chekupedzisira. Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti makatarisa neako Mudzidzi Chiitiko Advisor kuti uone kuti wasangana nezvose zveYunivhesiti zvinodiwa sezvakanyorwa mukabhuku yeyunivhesiti. Kana iwe ukasasangana nezvose zvinodiwa, degree rako harizopihwe kusvikira zvese zvinodiwa zvasangana. Ndapota yeuka kuti ibasa rako kuona kuti zvese zvinodiwa zvasangana.
2. Raira Kapu Yako, Gown, uye Tassel
Vadzidzi vanoshuvira kutora chikamu mumhemberero yekupedza kudzidza vanofanirwa kutenga Graduation regalia (cap, gown uye tassel) pasati papfuura May 21, 2021. Vadzidzi vanokurudzirwa kuodha yavo regalia zvakanaka pamberi peino nguva yekupedzisira kuti vaone kuendesa panguva. Uku kutenga hakuwedzerwe sechikamu chemubhadharo wekupedza kudzidza. Zvinhu izvi zvinogona kurairwa online pa Herff Jones kana mumunhu paGraduation Celebration Event.
3. Kudza Tambo, Hoods, uye Pini
Izvi zvinhu zvinokudzwa zviripo zvekutora kuFort Myers kambasi, kana iwe unogona zvakare kubvunza shamwari kana nhengo yemhuri kuti ikusimudzire tambo. Iwe unogona zvakare kuvatora iwo pazuva rekutanga.
4. Raira Kupedza Kudzidza Photography
Hodges University yakahaya GradImages semutemo anotanga kutora mifananidzo wemuchikoro chedu uye / kana mutambo wekutanga. Mifananidzo mitatu yemumwe neumwe akapedza kudzidza inotorwa panguva yechiitiko ichi:
Sezvo iwe uchiita nzira yako kuenda kuchikuva.
Sezvo imi muchizunza Mutungamiri ruoko pakati pechikuva.
Mushure mekunge mabuda mudariro.
Zviratidzo zvako zvichave zvakagadzirira kuona pamhepo nekukurumidza maawa makumi mana nemasere mushure memhemberero. Kunyangwe paine pasina chero chisungo chekuhodha, iwe unozochengetedza makumi maviri kubva muzana maodha emadhora makumi mashanu kana kudarika kuti utore chikamu. Kufano-kunyoresa ingori nzira yekuve nechokwadi chekuti ruzivo rwako rwekufambidzana nderekupedzisira-neGradImages, kuti vagone kupa humbowo hwako hwekuremekedza nekukurumidza sezvazvinogona. Kuti utange kunyoresa kune chako chekutanga humbowo, ndapota shanya GradImages.
Sechikamu chekupedza kudzidza uye pre-kunyoreswa kutora chikamu, GradImages inokutumira iwe maemail, tsamba mapepa ekufotera humbowo, uye inogona kutumira zvingasarudzika mameseji ezaziso.
5. Pedzisa Zvese Degree Zvinodiwa
Vanogona vanopedza kudzidza vanofanirwa kupasa uye kupedzisa zvese degree zvinodiwa ne Dai 2, 2021, kuitira kuti unyorwe muChirongwa Chekutangisa.
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekugadzirisa zvese ruzivo rwenyu neRegistrar Hofisi. Izvo zvinyorwa zvakadhindwa padiploma yako zvichagadziriswa neruzivo rwatinaro pane yako faira. Madiploma anozotumirwa kune vadzidzi kukero iri pafaira.
Tinokurudzira vadzidzi vese kuti vatarise yavo account account neOffice yeVadzidzi maAccount vasati vatanga. Ndokumbira kuti uzive kuti kukundikana kugutsa zvese zvisungo zvemari neyunivhesiti zvinogona kukutadzisa kuwana diploma yako uye / kana zvinyorwa nenzira yakakodzera.
Vakapedza Kudzidza Ruzivo rweVadzidzi
Kusvika & Gungano
Ndokumbirawo kuti muronge kusvika pasati papfuura 1:30 pm kuti muongororwe mirairo yemhemberero.
Paunosvika, vanopedza kudzidza vanogona kupinda kuburikidza neEast ekupinda kwenzvimbo yeHertz.
Mumwe nemumwe akapedza kudzidza anotora rake / zita rake kadhi pamatafura ari kuseri kwechikuva. Makadhi anodhindwa aine zita rako repamutemo pairi uye anoenderana izvo zvakadhindwa muchirongwa Chekutangisa.
Paunongogamuchira kadhi rako, ndapota zadza chikamu chemashoko ekuonana kuseri kwekadhi kune uyo anotora mifananidzo.
Iri kadhi rinofanira kutakurwa newe kusvikira rapihwa mushamarari usati wayambuka danho.
Kadhi racho zvakare rine chigaro chako chakanyorwa muzasi rerudyi kona.
Zvigaro zvekupedza kudzidza zvinopihwa chigaro nhamba mune chero Chikamu 115, 116, kana 117 alfabheti, uye nechirongwa.
Ndokumbira utarise kuti kusvika pachigaro chako, unofanirwa kufamba kumusoro. Kana iri iri dambudziko ndapota regai vashandi veyunivhesiti vazive zuva reChechi risati rasvika.
Ive neshuwa une rako zita kadhi newe usati watanga mudungwe.
Mamwe makapisi uye magown achaunzwa kumhemberero kana yako ichida kutsiviwa saka ndokumbirawo uone mushandi wepayunivhesiti kana uine dambudziko. Ndokumbira utarise kuti pachave neakaganhurirwa huwandu hwemamwe makapisi uye majazi pamhemberero; kana paine matambudziko nekopu yako uye / kana jasi mazuva mana kana kupfuura pamberi pemhemberero, ndapota huya kukampasi yeFort Myers kuti utaure neHofisi yeAuxiliary Services nezve kofi yekutsiva uye / kana gown.
Kodhi Kodhi & Mufambiro
Ndapota uyai kugadzirira kupenya!
Iwe unotarisirwa kupfeka izere rokwe redzidzo (chivharo, jasi & rukudzo tambo kana tenzi hood, kana zvichibvira) kwenguva yakareba yekupedza mhemberero.
Vakapedza kudzidza vanozopfeka ngowani dzavo uye magemenzi vasvika kuHertz Arena. Vashandi vachave varipo kuti vabatsire.
Ndokumbira usiye zvese zvakakosha uye zvega zvinhu nemhuri, shamwari kana vashanyi.
Zvipfeko zvakajairwa kupfeka nejasi:
Varume - hembe yekupfeka ine kora, rakasviba rakasviba, rakasviba tai, uye shangu nhema.
Vakadzi - rima rokwe, kana siketi kana bhurugwa nebhurauzi, neshangu, shangu dzakapfigwa. Shangu dzakakwirira-zvitsitsinho hadzikurudzirwe. Flip-flops, tenesi shangu, uye shangu chena hazvifanirwe kupfekwa.
Kana zvichidikanwa, ndokumbira ubaye gown rako nedare rinotonhorera.
Iyo kapu inofanirwa kurara yakati batai nechekechera yakarembera nechemberi kurudyi. Vakapedza kudzidza vanofanirwa kungwarira kuti varege kuti mucheka unopindirana apo mifananidzo iri kutorwa.
Kana zvichikwanisika, tambo dzekuremekedza dzinofanirwa kuve dzakapfekedzwa muhuro nemhashu dzakaturika kubva kudivi rega. Rukudzo tambo dzichagovewa maererano nemayunivhesiti mutemo:
Sirivheri & Tsvuku yesumma cum laude (3.90-4.0 GGPA);
Kaviri Tsvuku kune magna cum laude (3.76-3.89 GGPA); kana
Sirivha yakapetwa yecum laude (3.50-3.75 GGPA).
Yunivhesiti inoita kuyedza kwese kuronga uye kuitisa zvine musoro, zvine chiremera mhemberero. Kuziva kwako kubudirira muzvidzidzo kunofanirwa kucherechedzwa neruremekedzo. Kuita zvisina kurongeka, rowdness, kana kuvepo kwedoro kana zvinodhaka zvichave zvikonzero zvekubviswa nekukasira uye zvinogona kukonzera kuti diploma rako richengetwe neyunivhesiti.
Vakapedza kudzidza vanorayirwa kuti vashandise zvimbuzi nguva isati yatanga mhemberero, nekuti hauchazobvumidzwa kusiya zvigaro zvako kana mutambo watanga.
Vakapedza kudzidza vanodiwa kuti vagare vakagara mukati mechirongwa.
Vakapedza kudzidza vakagara muzvikamu 115, 116, kana 117 muhurongwa hwekuti vafambe vachidarika nhanho. Iyi odha inopindirana nenzira iyo madhigirii akanyorwa muchirongwa chekutanga, alfabheti, uye nedhigirii.
Iwe unozokumbirwa kuti udzike pasi kune iyo nzvimbo yepasi pa3: 30pm Iwe uchaumba mitsara yakawanda sezvinobvira kuseri kwechikuva. Kana kufamba kwacho kuchinge kwatanga, vadzidzi vacharamba vachienda kunzvimbo yepasi nekukurumidza sezvazvinogona. Vadzidzi vanonoka kunonoka vanoiswa kumashure kwevamwe vese vakapedza kudzidza uye vangangogara pasi padivi pevamwe vachiwana degree rakaenzana uye rakakura. Ndapota ita chokwadi chekusvika nenguva.
Grand Marshal Sachigaro weBhodi
Mapurogiramu ekutanga anozopihwa iwe paunopinda pasi pevhu.
Pinda pasi pevhu padivi kuchamhembe kwenhandare. Pfuurira uchienda kuseri kwezvigaro, tendeuka kurudyi, uye dzoka kurudyi zvakare mukati mepaseji.
Kutanga Mhemberero Dhata
Mushure mekunge mudzidzi uye mutauri mutauri apedza, purezidhendi anozokumbira vese vanokwikwidza degree raTenzi kuti vafadze kumira.
Madhigirii aTenzi anozopihwa nemutungamiri wenyika.
Kana chikamu ichi chapera, iwe unozotumirwa kunhandare nzvimbo kwaunofamba uchiyambuka nhanho imwe panguva kuti uone munhu akafanosarudzwa.
Ndokumbira uvape zita rako kadhi rakatarisana kumusoro kuti iye / iye agone kuverenga zita rako.
Ukangotambidza zita rako kadhi, pfuura nepakati pechikuva sezvakaratidzwa pachati.
Nzira chaiyo yekutambira diploma diploma kubva kuna Dr. Meyer iri neruoko rwako rweruboshwe. Wadaro, kwazisana ruoko neruoko rwerudyi.
Apa ndipo panotorwa imwe yemifananidzo saka ndokumbirawo rangarira kunyemwerera.
Grand Marshal inozo shandura mucheka wako ndokukwazisa ruoko.
Alumni Network ichakupa chipo, uye fakaroti ichakukorokotedza usati wadzokera pachigaro chako.
Ndapota gara pasi paunodzokera kuchigaro chako.
Bachelor's, shamwari, uye chitupa vanopedza kudzidza vachatevera iwo mamwe maitiro.
Kana iwe ugere muChikamu B, ndapota tevera nzira dzakapihwa kuti upinde pachikuva uye dzokera kuchigaro chako.
Vashandi veHodges University vanokuzivisa iwe kana mutsara wako ungabuda.
Ndokumbirawo kuti usamire kana iwe wasvika munzvimbo iri kuseri kweiyo nhanho sezvo vamwe vakapedza kudzidza vari kuyedza kusiya futi.
Edza kufanoronga-gadzirira nzvimbo yemisangano nemhuri yako neshamwari sezvo iwe uchigona kubuda munhandare kubva kune chero divi kuseri kwedanho.
Iyi mhemberero yekutanga yekutangisa inogona kutariswa papeji redu repamba na4: 00 masikati muna Chikumi 20th, 2021.
Mafambiro kuHertz Arena
Kubva kuchamhembe: Tora I-75 Kubuda 128 (Alico Road). Tungamira kumabvazuva kuAlico Road kuenda kuBen Hill Griffin Parkway. Tora Ben Hill Griffin kwemakiromita angangoita matatu kumaodzanyemba. Iyo Arena iri kurudyi-ruoko.
Kubva kumaodzanyemba: Tora I-75 Kubuda 123 (Corkscrew Road). Tungamira kumabvazuva kuCorkscrew Road. Tora Ben Hill Griffin kuchamhembe uye iyo Arena iri kuruboshwe-kuruboshwe.
Nzvimbo yekupaka inovhura maawa matatu pamberi peMutambo wekutanga.
Kune yakakwana yekupaka inowanikwa kuHertz Arena munzvimbo dzakapoteredza dzekupaka.
Iko hakuna kubhadharisa kupaka.
Hertz Mitemo yekuunza wega zvinhu ***** Ndapota Verenga
Hertz Arena ine mitemo yakaoma yezviri uye isingatenderwe kuunzwa munzvimbo. Dzvanya HERE kune iyo mitemo, iyo ichaomeserwa zvakanyanya.
Vaenzi vanofanira kusvika pakati pa3: 00 na3: 30 masikati
Iyo nhandare inopa yakavhurika zvigaro, hapana matikiti anodikanwa.
Zvigaro zvakaremara zvinowanikwa munzvimbo yekumaodzanyemba inomira. Kune nzvimbo yakavhurika yemawicheya uye mamwe machair-akasununguka akamira. Mumwe muenzi anogona kugara nemuenzi akaremara.
Ndokumbira utarise kuti vafambi vevacheche, mabharuni, uye maruva hazvibvumirwe munhandare. Vanofambisa, mabhaluni, uye maruva anozoongororwa-nevashandi veHertz uye vanochengetwa padhesiki hombe uye vanogona kutorwa mushure memhemberero.
Imwe yemvumo yekutengesa ichave yakavhurika chikafu uye zvinwiwa kumaodzanyemba kwenhandare.
Vabereki, mhuri, uye shamwari vanokurudzirwa kuti vagare vakagara, sezvo kusiya mhemberero kunoratidza kusaremekedza kwakanyanya kune vese varipo.
Ndokumbirawo muyeuke kuti hapana munhu anotenderwa kupinda mupasi huru kana mumatirongo kutora mifananidzo.
Nyanzvi yemifananidzo yakapihwa basa kuti itore kwete-zvechisungo mapikicha emumwe neumwe akapedza kudzidza.
Mifananidzo inogona kutorwa nemhuri uye shamwari kubva kunzvimbo dzekugara.
Kupedza Kudzidza Kwevadzidzi FAQ's
Ndekupi kwandinoenda kunotora tambo dzangu dzekukudzwa?
Kudza tambo dziripo kuti utore paFort Myers kambasi, kana iwe unogona zvakare kubvunza shamwari kana nhengo yemhuri kuti ikusimudzire tambo. Iwe unogona zvakare kuvatora iwo pazuva rekutanga.
Ndini ndinotora diploma yangu?
Semunhu akapedza kudzidza kuHodges, iwe unozogamuchira zvese diploma yedigital uye diploma yemuviri. Mirayiridzo yekuwana diploma yako yedhijitari inotumirwa kune yako Hodges email. Chitupa chako chemuviri chinotumirwa kukero iri pane iyo faira.
Ndiani wandinosangana naye kana ndiri kuwana mhosho meseji pandinodzvanya chinongedzo pane peji rekupedza kudzidza?
Paunenge uchinge waisa fomu yekupedza kudzidza nekuzadza Chinangwa cheGraduate fomu, system yedu haizokutenderi kuti udarowo. Ichi ndicho chikonzero iwe ukawana yekukanganisa meseji. Kana iwe usina kupedzisa Chinangwa cheGraduate fomu, ndapota nyorera Hofisi yeRegistrar pa 239-938-7818 kana registrar@hodges.edu.
Ndinoodha sei matikiti ekupedza kudzidza? Kana ndichida mamwe matikiti ekupedza kudzidza, chii chandinofanira kuita?
Pawakapedza Chinangwa chako kuFomu rekupedza kudzidza, paive nenzvimbo yekuisa huwandu hwemhuri / shamwari dzinenge dzichipinda. Hatidhindise matikiti ekupedza kudzidza, saka kana uine imwe mhuri / shamwari dzinoda kuenda, ivo vanogamuchirwa!
Ini ndinogona kushongedza yangu yekupedza cap?
Tinokukurudzira kuti ushongedze cap yako! Ndokumbirawo kuti urambe uchifunga kuti inofanirwa kuve yakashongedzwa kuratidza iko kunakidzwa kwekuita kwako, zvisinei, inofanira kuitirwa mune yakanaka kuravira uye neruremekedzo. Ndokumbirawo urangarire kuti muchekechera wako unonamatira kune yako chivharo - ndapota usaise chero chinhu pane kapu yako chingatadzisa muchekeche kuti uiswe pane kapu yako.
Ini ndinogona kutora regalia yangu pamhemberero yekupedza kudzidza?
Isu tinokurudzira zvikuru kuti HAUYE kumirira kusvikira mhemberero yekupedza kutora / kutenga yako regalia. Tichava neakaganhurirwa huwandu hwezvigaro pamhemberero neyakaganhurirwa huwandu hwehukuru. Chinhu chinonyanya kusarudzika ndechekuodha yako regalia chero nguva pa http://colleges.herffjones.com/college/_Hodges/ asi zuva rekupedzisira kuodha ndere Dai 21, 2021. Vadzidzi vanokurudzirwa kuodha yavo regalia zvakanaka pamberi peino nguva yekupedzisira kuti vaone kuendesa panguva.
Ndiani wandinotaurirana naye nezvekupedza kudzidza mibvunzo?
YeRegalia (cap / gown), master hoods, masasa, diploma mafuremu, mapini ekuonga, alumni pini, fizi yekupedza, nezvimwewo, bata Hofisi yeAuxiliary Services pa (239) 938-7770 kana universitystore@hodges.edu.
Kune madiploma, tambo dzekuremekedza, zvinyorwa (mushure mekupihwa degree), bata Hofisi yaRegistrar pa (239) 938-7818 kana registrar@hodges.edu
Ramba Wakabatana! #HodgesAlumni
Iyo Hodges University Alumni Network ndiyo nzira yako yekugara yakabatana kunetiweki uye kusangana neyako Hodges Alum. Iko hakuna mutengo wekutora chikamu uye akawanda mabhenefiti ekuve nhengo. Ndokumbirawo kuti chengetai iyo Alumni Network yakagadziridzwa yechero kero uye shanduko yebasa, uye / kana hunyanzvi zvinoitwa kuitira kuti tigovane kubudirira kwako nevamwe. Taura nesu pa alumni@hodges.edu. Kero yazvino yeemail yakakosha kune vealumini kuonana uye kugashira ruzivo rwealumni.